An’hetsiny no nanao fihetsiketsehana tao Hong Kong manohitra ny volavolan-dalànan’ny fampodiana olona ho any Shina · Global Voices teny Malagasy
An'hetsiny no nanao fihetsiketsehana tao Hong Kong manohitra ny volavolan-dalànan'ny fampodiana olona ho any Shina
Handà ilay volavolandalàna ve i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao an-tanàndehibe ?
Voadika ny 02 Jolay 2019 14:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Shqip, русский, Español, عربي, 繁體中文, Ελληνικά, Italiano, English
Vahoaka nanao fihetsiketsehana goavana nanohitra ny volavolan-dalànan'ny fampodiana olona voampanga ho any Shina tany amin'ny faritra maro tao Hong Kong tamin’ny 9 Jona 2019. Sary tao amin’ny inmediahk.net.
Vahoaka an'hetsiny no nidina an-dalàmbe tao Hong Kong ny Alahady 9 Jona 2019 mba hanakana ny governemanta tsy handany ny fanitsiana ireo lalàna fampodiana olona fandroahana azy hiverina any amin'ny tanindrazany, tafiditra ho ao anatin'ny ahitsy ny hitsivolana momba ireo olo-meloka nitsoaka sy ny didy hitsivolana fiarahamiasa ara-pitsarana eo amin'ny raharaha heloka bevava.
Nanomboka tamin’ny 2 ora sy sasany ny fihetsiketsehana ary nampihitsoka ny faritra maro tao amin'ny nosy Hong Kong ny vahoaka nanao fihetsiketsehana goavana. Nitatitra ny hetsi-panoherana teo akaikin’ny Victoria Park, izay toerana nanombohan'izany i Anna Pearce:
Tsy mila fampodiana olona ho any Shina. Fandraisana anjara tsy mampino tamin’ny fihetsiketsehana tany Hong Kong.
Feno olona mpanao fihetsiketsehana ny arabe
Nanombatombana ny mpikarakara ny hetsika Civil Human Rights Front (Mandatehezana Sivily mpandala ny Zon'olombelona) fa mihoatra ny iray tapitrisa ny mpanao fihetsiketsehana satria goavana kokoa ny halehiben'ny hetsika noho ilay hetsika nanohitra ny lalànan'ny fiarovam-pirenena tamin’ny 1 Jolay 2003. Saingy nilaza ny mpitandro ny filaminana fa olona miisa 240.000 teo monja no teny an-dalambe nandritra ny famoriam-bahoaka. Araka ny filazan’i Jeffie Lam, mpitati-baovao avy ao amin’ny South China Morning Post fa nanamarika ny tantara ny vahoakan’i Hong Kong androany :
Nanamarika tantara ny vahoakan’i Hong Kong androany. Ny lalana rehetra nanodidina ny Hennessy, anisan’izany ireo lalana izay tsy nosokafan’ny polisy teo aloha dia hipoka mpanao fihetsiketsehana manohitra ny volavolan-dalànan'ny fandroahana olona hody any Shina.
Nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa hanamora kokoa ho an'i tanibe Shina hisambotra ireo mpitsikera, ireo mpanohitra ary eny fa na dia ireo mpanao gazety any Hong Kong ihany koa aza ilay fanitsiana ny volavolan-dalàna. Nihiaka ireo hoe’’ tsy mila lalàna lò’’ ary nitaky ny fialan'ny lehiben'ny mpanatanteraka ao an-tanandehibe, Carrie Lam .
Sora-baventin'ny mpanao fihetsiketsehana: Tsy mila fandroahana olona ho any Shina; miala i Carrie Lam mpandainga. Sary avy amin'ny inmediahk.net CC: AT-NC
Nilaza tamin’ny mpanao gazety avy ao amin'ny inmediahk.net ny mpanao asa sosialy iray fa mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana izy mba hiaro ireo olona miasa ao amin’ny sehatry ny asa soa sosialy satria hosamborina ireo izay mikasa hanao fanovana miabo eo amin’ny fiarahamonina araka ny rafi-pitsarana Shinoa. Mihevitra ny mpianatra iray hafa izay nanao fihetsiketsehana fa raha vao lany ny fanitsiana ilay volavolan-dalàna dia ho “vita hatreo” ny amin'ny tanandehibe, satria hifarana ny fitsipiky ny lalàmpanorenana amin'ny ‘’ Firenena Iray, Rafitra Roa’’.
Androany, milaza amin'izao tontolo izao ny vahoakan'i Hong Kong fa manohitra volavolan-dalànan'ny fandroahana an-tanindrazana izy ireo !
Efa nisy fihetsiketsehana goavana maromaro manohitra ity volavolan-dalàna ity. Tamin'ny 30 Martsa (2019), olona manodidina ny 12.000 no nanao fihetsiketsehana nanomboka tao Wanchai ka hatrany amin'ny Admiralty talohakelin’ny nanoloran’ny governemanta ilay fanitsiana ilay volavolan-dalàna tany amin’ny mpanao lalàna. Iray volana taty aoriana, ny 28 Aprily (2019), olona miisa 130.000 teo ho eo no nidina an-dalambe nitaky ny fanesorana ilay volavolan-dalàna.
Nahasarika ny sain’izao tontolo izao ny andiana hetsi-panoherana. Maro ankehitriny no manara-maso raha hanaisotra ilay volavolan-dalàna nampiady hevitra izay ho dinihina fanindroany ao amin’ny Antenimiera amin’ity herinandro ity ny lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny tanàndehibe, Carrie Lam.
Ny governemantan'i Hong Kong no nanolotra voalohany ny fanitsiana ilay volavolan-dalàna tamin’ny volana Febroary (2019) mba hanomezana misimisy kokoa ny fahefana bebe kokoa ho an’ny lehiben'ny mpanatanteraka sy ny fitsarana eo an-toerana amin'ny fandraisana an-tànana isaky ny raharaha fampodiana olona ho any an-tanindrazany avy any amin’ny fitsarana mahefa tsy misy fifanarahana mialoha, indrindra fa ho an’i Taiwan sy i Shina. Nanambara ny governemanta raha nilaza ny raharaha famonoana vehivavy iray bevohoka tany Taiwan fa ny mba hisorohana ny ‘’lavaka amin'ny lalàna’’ izay mamela ireo olo-meloka handositra ny sazin’izy ireo no tanjon’ny fanitsiana ilay lalàna.
Na izany aza, nanarika ny manam-pahaizana momba ny lalàna fa ilay antsoina fatratra hoe ’’lavaka’’ raha ny marina dia rindrin'afo hanakanana ireo ahiahiana ho voampanga mba tsy hatolotra fitsarana any amin’ny tanibe Shina izay tsy misy fitsarana ara-drariny.
Tandindonin-doza ireo Mpiaro ny zon’olombelona, ireo mpanao gazety, ireo mpiasan’ny FTMF ary ireo mpanao asa soa
Nampahafantatra ireo sehatra samihafa fa raha natao tsy nisy fanaraha-maso avy amin'ny mpanao lalàna ny fangatahana fampodiana dia hanome fahefana fototra ara-dalàna ho an’ireo manampahefana Shinoa hisambotra ireo mpanohitra ara-politika ny fanitsiana ny volavolan-dalàna. Nambara tao amin’ny taratasy misokatra izay niarahan’ny fikambanana tsy miankina nanao sonia mihoatra ny 70 izany ahiahy izany :
Araka ny hita ny tsy fisian'ny fahaleovantena ara-pitsarana Shinoa sy ny tsy fahalavorarian'ny dingana arahana izay matetika miteraka ny fitsarana tsy ara-drariny dia manahy izahay fa ny fanovana natolotra dia mety hampidi-doza ny olon-drehetra eto amin’ny tanin’i Hong Kong izay efa nanao asa mifandraika amin’ny Tanibe, anisan’izany ireo mpiaro ny zon’olombelona, ireo mpanao gazety, ireo mpiasan’ny ONG ary ireo mpanao asa sosialy, eny fa na dia any ivelan’ny Tanibe aza ilay olona rehefa nataony ny heloka bevava. Miantso ny governemantan’i Hong Kong izahay mba hanaisotra haingana ilay volavolan-dalàna…
Nihaona tamin’ireo solontena avy amin’ny tontolon’ny fihariana tao an-toerana ary nangataka azy ireo hanohana ilay volavolan-dalàna indray anefa no nataon'ny biraon’ny Fifandraisan'i Beijing fa tsy namaly ny ahiahy nolazain’ireo mpanao fanangonan-tsonia. Nandritra izany fotoana izany, misy ny faneken'ny governemantan'i Hong Kong manoloana ny sehatry ny fihariana amin'ny tsy ampidirana ireo heloka sivy mpihatra amin'ny mpiasa ambony ho ao anatin'ny volavolan-dalàna sady nampitombo ny sazy farany ambany hanaovana fandroahana olona hody an-tanindrazany avy amin'ny telo taona mankany amin'ny fito taona an-tranomaizina.
Saingy etsy ankilany, notapahana ny hevitra fa ho dinganina ny fanapahan-kevitry ny komitin'ny mpanao làlana ary natolotra ilay volavolan-dalàna ho ao amin’ny adihevitra feno ao amin’ny vaomiera mpanao lalàna.
Manambara mazava sy miharihary amin’ny vahoaka ny fitsabahan'ny biraon'ny Fifandraisana ao Beijing mivantana sy ny fanitsakitsahan'ny governemantan’i Hong Kong ny dingana ara-panaovan-dalàna fa fanapahan-kevitra ara-politika nampiady hevitra ity fanitsiana volavolan-dalàna ity izay lavitry ny fiarovana ny tombontsoan’ny vahoaka ao Hong Kong.
Azo atolotra an'ireo manampahefana Shinoa Tanibe ihany koa ireo vahiny izay mankany Hong Kong amin’ilay fangatahana fampodiana olo-meloka araka ity volavolan-dalàna ankehitriny ity. Naneho ny ahiahiny momba izany ireo diplaomaty avy any Etazonia, sy Kanada ary ny Vondrona Eoraopeana. Ary manahy ny olona sasany fa hivadika ho kianjan'ady politika iraisampirenena i Hong Kong amin'ilay fanitsiana volavolan-dalàna ao anatin'izao ady ara-barotra mitohy eo amin’i Etazonia sy Shina izao :
Ny kinendry amin'ny fiantraikan'ny fanitsiana dia azo jerena ho dindon'izay nampiasain’ny governemantan'i Etazonia tamin’ny raharaha Meng [ Fanamarihana : ny fisamborana an’i Meng Wanzhou tao Canada taorian’ny fangatahana fampodiana nalefan’i Etazonia tamin’ny 1 Desambra 2018]. Mety ho voasambotra daholo ny olona rehetra mankany Hong Kong raha lany ny fanitsiana ary hatolotra any Shina Tanibe avy amin’ny fankatoavan’ny fitsarana na ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ary tsy misy fanapahan-kevitra avy amin'ny Vaomieran'ny Mpanao Lalàna ao Hong Kong.
Mpisolovava maherin’ny 2.500 no nanao fihetsiketsehana manohitra ny fanitsiana ny lalàna momba ny fampodianaolo-meloka ny 6 Jona (2019) . Sary : Kris Cheng/HKFP.
Namaly tamin’ny fiampangana ny mpanohitra tamin’ny famitahana ny vahoaka ny governemantan’i Hong Kong.
‘’Diabe mainty’’ avy amin'ireo mpisolovava
Tsy ireo mpanao politika mpanohitra ihany no anisan’ireo sahy niteny nanohitra ny volavolan-dalàna fa teo ihany koa ireo mpikambana matihanina amin'ny sehatry ny lalàna. Ny 6 Jona (2019), nikarakara ‘’diabe mainty’’ manohitra ny volavolan-dalàna nampiady hevitra ny tontolon’ny mpahay lalàna. Niakanjo mainty, nanodidina ny 2.500 teo ho eo ireo mpisolovava no nivory tao ivelan'ny Fitsarana Tampony ary nizotra am-pilaminana hatrany amin’ny foiben'ny governemanta. Talohan’ny ‘’diabe mainty’’, samy naneho hevitra tamin’ny governemanta ny fikambanana BAR sy ny fikambanana Lalàna ary nangataka fakan-kevitra lalina any amin’ny mpahay lalàna sy ireo mpandray anjara hafa.
Raha nampanginin'ny governemantan'i Hong Kong ny adihevitra tao amin’ny mpanao lalàna dia nanohy nampiaka-peo ireo mpanohitra teny ifotony. Tao anatin’ireo herinandro vitsivitsy, tondraky ny fanentanana fanangonan-tsonia niarahana manohitra ny fanitsiana avy amin'ireo vondron'ny mpianatra maintimolaly avy amin'ny oniversite an-jatony sy ny lisea ary ireo vondrona Kristiana sy ireo fikambanana teo amin’ny manodidina ireo sehatry ny tambajotra sosialy .
Naneho ny heviny ihany koa ireo teratany Hong Kong tany ivelany. Nikarakara hetsi-panoherana ilay volavolan-dalàna ihany koa ny vondrom-piarahamonina any am-pielezana avy ao Hong Kong izay ahitana tanàndehibe miisa 25 eo farafahakeliny, anisan’izany i Londres, New York, Berlin, Toronto, Melbourne ary Tokyo, ankoatra ireo hafa.
Nohirahiraina tao afovoan-tanànan’i Sydney (Aostralia) ny teny filamatra hoe Tianay Hong Kong sy ny hoe Tianay ny Fahafahana. toherin'ny mpanao fihetsiketsehana ny lalànan'i Hong Kong izay mamela ny fampodiana/fandrohana ho any amin’ny Tanibe Shina. Nanombatombana ny mpandray anjara ho 2.000 teo ny polisy.
Miandry izao tontolo izao raha hanala na hanohy ny fizotry ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fampodiana/fandroahana ao amin’ny Antenimiera (amin’ity herinandro ity) i Carrie Lam.